New Skiin Brightening Exfoliation Toner ပြောင်တင်း-ကြည်ရှင်း-ဖြူဝင်းစေမယ့် New Skiin Brightening Exfoliation Toner - Low pH - Skin Brightening & Anti Wrinkle - Dual Functionality Approved By KFDA Skin Care တွေ အသုံးပြုနေပေမယ့် မထိရောက်ဘူးဖြစ်နေသလား ? ဒီပြဿနာကို New Skiin Brightening Exfoliation Toner က ဖြေရှင်းပေးပါမယ်။ အရေပြားဆဲလ်အသေများဖုံးအုပ်နေတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့အရေပြားက Skin Care များကို စုပ်ယူနိုင်မှု အားနည်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် New Skiin Brightening Exfoliation Toner ကို အသုံးပြုပြီး အရေပြားကို ပုံမှန် ချေးချွတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အသုံးပြုသော Skin Care များရဲ့ စိမ့်ဝင်မှုအား ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် Skin Care များရဲ့ အကျိုးအကျေးဇူးကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိစေပါတယ်။ အဓိက အကျိုးသက်ရောက်မှု ၁။ ချေးချွတ်ခြင်း AHA (Citric Acid) နှင့် PHA (Lactobionic Acid) တို့က အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်အသေများ၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေကို သန့်စင် ချောမွတ်လာစေသည်။ ၂။ အစိုဓါတ်ထိန်းပေးခြင်း Sodium Hyaluronate ပါဝင်ပြီး အသားအရေ အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။ တင်းရင်းပြီး အရေအကြောင်းကင်းစင်တဲ့ အရေပြားကို ရရှိစေသည်။ Xilytol က လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး အရေပြားကို အစိုဓါတ်လည်း ဖြည့်တင်းပေးသည်။ ၃။ အရေပြားကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေခြင်း White willow bark extract က အရေပြားကို နိုးဆွမှုအနည်းဆုံးဖြင့် သန့်စင်ပေးသည်။ Sensitive ဖြစ်တဲ့ အရေပြားကိုလည်း ပိုမိုကြံ့ခိုင်လာစေသည်။ Madecasoside က Sensitive ဖြစ်တဲ့ အသားအရေကို ကျန်းမာလာစေပြီး ကိုလာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးသောကြောင့် အရေပြားကို တင်းရင်းနုပျိုစေသည်။ ၄။အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေခြင်း Bioluminopeel Patented Components (No. 10-1393438) Reborm စက်ရုံတစ်ခုတည်းမှ မှတ်ပုံတင်ထားသော အထူးပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် Bioluminopeel က အရေပြားဆဲလ်များမှ မယ်လနင်အရောင်ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ချပေးပြီး တင်းတိတ်၊ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေကာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေသည်။ အသုံးပြုပုံ မည်သည့်အသားအရေအမျိုးအစားမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ညအချိန် New Skiin Facial Foam ဖြင့် မျက်နှာသစ်ပြီး သန့်စင်သော အရေပြားပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Cotton pad ဖြင့် သင့်တော်သော ပမာဏထည့်ပြီး မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းအနှံ့ အသုံးပြုပေးနိုင်သည်။ အရေပြားပေါ်အားပြင်းစွာဖြင့် ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ရှောင်ကျဥ်ပါ။ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၁။ AHA Citric Acid သံပုရာသီး၊ သံပုယိုသီး၊ လိမ္မော်သီးတို့မှ ရရှိသော Citric Acid ကို ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားသည်။ Alpha Hydroxy Acid က အရေပြားချွေးပေါက်များကိုသန့်စင်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။ ချွေးပေါက်ကင်းစင်ပြီး ချောမွတ်သော အသားအရေကိုရရှိစေသည်။ Citric Acid တွင် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်စွမ်းအား ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြား အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ ၂။ PHA (Lactobionic Acid) Polyhydroxy Acid သည် Hydroxy Acid များထဲတွင် Molecular size အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အရေပြားအပေါ်ယံမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေများ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးသည်။ နို့မှ ထုတ်လုပ်ထားသော Lactobionic Acid တွင် အစိုဓါတ်ထိန်းပေးသော အစွမ်းလည်း ပါဝင်တာကြောင့် ချေးချွတ်သန့်စင်ပြီး အသားအရေ‌ခြောက်သွေ့မှုကနေ ကာကွယ်ပေးသည်။ Sensitive Skin နှင့်ပါ သင့်တော်သော Acid အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၃။ BioluminoPeel (Pyrus Malus(Apple)Fruit Extract) Reborm စက်ရုံမှ N0.10-1393438 ဖြင့် တစ်ဦးတည်းထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ထားသော အထူးပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ပန်းသီးအခွံမှ ထုတ်နှုတ်ထားသော Ursolic Acid ဖြစ်သည်။ ပန်းသီးအခွံကို ပြောင်တင်းနေစေသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ BioluminoPeel က သင့်အသားအရေကို ‌ပြောင်တင်းဝင်းပလာစေမည်ဖြစ်ပြီး အရေပြားအတွင်းမှ မယ်လနင်ဓါတ်ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေကာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေသည်။ ၄။ Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract အရေပြားမှ အစိုဓါတ်အငွေ့ပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အရေပြားကို မခြောက်သွေ့စေပဲ အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အရေပြားကို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေပြီး ကျန်းမာလာစေသည်။ သဘာ၀မွေးရနံ့ကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ၅။ Citrus Reliculata (Tangarine) Fruit Extract အ‌ရေပြားဆဲလ်များကို အားအင်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးမှုများမှ ကာကွယ်ပေသည်။ အရေပြား၏ အဆီဓါတ်မျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ Polyphenol ဆိုသော အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းပါ၀င်ပြီး အရေပြား အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အစိုဓါတ်ထိန်းပေးပြီး အရေပြား ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မယ်လနင်ဓါတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို လျော့ချပေးသည်။ ဗီတာမင်ဓါတ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားခုခံအားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ၆။ Fruit Complex 1 အသားအရေကို ကျန်းမာတင်းရင်းလာစေသည်။ အစိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး သန့်စင်သော အရေပြားကို ရရှိစေသည်။ ပါဝင်သော သစ်သီးများမှာ Watermelon Extract (ဖရဲသီး အဆီအနှစ်) , Lemon Extract (သံပုယိုသီး အဆီအနှစ်) , Kiwi Extract (ကီဝီသီး အဆီအနှစ်) , Tomato Extract (ခရမ်းချဥ်သီးအဆီအနှစ်) , Beach Strawberry Extract (စတော်ဘယ်ရီသီး အဆီအနှစ်) , Orange Extract (လိမ္မော်သီးအဆီအနှစ်) , Plum Extract (ဇီးသီး အဆီအနှစ်) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၇။ Fruit Complex2Bergamot ရှောက်ဘီလူးသံပုရာသီး၊ Tangerine အခွံပွလိမ္မော်သီး၊ Citron ရှောက်သီး၊ Orange လိမ္မော်သီး၊ Lemon သံပုယိုသီး၊ Lime သံပုရာသီး၊ Grapefruit ဂရိတ်ဖုသီးအဆီအနှစ်တို့ ပါဝင်ပြီး အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေသည်။ အရေးအကြောင်းများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ကျန်းမာ နုပျိုသော အသားအရေကို ရရှိစေသည်။ New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ်